XZ400 qodista jihada jihada jihada ayaa leh dhexroor ugu badnaan 900mm, ugu badnaan xoog riixitaan oo ah 400kN, Xuddunta 14000N · m, iyo miisaanka mashiinka qaawan ee 11.5t.
XZ400 HDD wuxuu leeyahay qaab dhismeed is haysta iyo muuqaal hufan. Halbeegyada waxqabadka farsamo ee ugu weyn waxay gaareen heerka horumarsan ee gudaha. Qeybaha ugu waaweyn iyo qeybaha iyo qeybaha isdaba jooga ah waa kuwa caanka ka ah gudaha waxayna leeyihiin waxqabad wanaagsan iyo tayo la isku halleyn karo, iyadoo la hubinayo kalsoonida codka ee mashiinka oo dhan.
Astaamaha Hordhaca XZ400 HDD
Xakamaynta tijaabada 1.Hydraulic, waxay siisaa waxqabad hawlgal raaxo leh iyo qawaaniin dabacsan, nooca heerka-koowaad ee qaybaha haydarooliga si loo hubiyo kalsoonida nidaamka mashiinka mashiinka.
Madaxa awoodda laba-xawaaraha ah, oo ku socda xawaare hoose markii uu qodanayo iyo dib u jiidayo si loo hubiyo dhisme siman; markaad dejineyso tuubada daloolka iyada oo aan culeys la saarin, madaxa awooda ayaa dardar galin kara isbadalka, yareynta waqtiga kaaliyaha iyo hagaajinta waxtarka shaqada.
4.Semi-otomaatiga ah raritaanka iyo dejinta qalabka tuubada daloolinta, ogaanshaha dhismaha otomaatiga ah ee hufan, si wax ku ool ah u yareynaya qiimaha dhismaha iyo xoogga shaqaalaha.
5.Taageerada baahiyaha kaladuwan ee macaamiisha, mashiinka waxaa lagu kordhin karaa qalabka tooska uqabsada tuubada qodista, nidaamka isdabamarinta otomaatiga ah, taksi, dabaysha qaboojiyaha, bilowga qabow, dhoobada barafka ah, dhoobada lagu dhaqo, dhoobada iyo qalabka kale
Motor Rotary / Riix Motor
Mashiinka saliidda ee Haydarooliga
Mashiinka XZ400 HDD wuxuu bilaabmaa markuu la socdo liiska xirxirashada, ku dar dukumiintiyada farsamada ee soo socda ：
Shahaadada alaabada / Buugga wax soo saarka / Qaybaha alaabta ee Atlas / Buugga dayactirka Mashiinka / Isticmaalka bamka dhoobada iyo buugga dayactirka
Hore: XZ320D qoditaanka jihada jihada jihada ah
Xiga: XZ420E qoditaanka jihada jihada jihada ah
Qiimaha Mashiinka Cagaarka